drink – OOTDMYANMAR
HOW MUCH WATER SHOULD YOU ACTUALLY DRINK IN A DAY?
No Comments on HOW MUCH WATER SHOULD YOU ACTUALLY DRINK IN A DAY?
တစ်နေ့ကို ရေပမာဏဘယ်လောက် သောက်သုံးသင့်သလဲ?
It’s not 8 glasses of water! Hydration is very important. Drinking water is almost the solution to everything. However, we all have to forget drinking eight glasses of wateraday—according to Harvard Medical School experts.
ရေရှစ်ခွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့ကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ရေသောက်ခြင်းက ပြဿနာအများစုအတွက်အဖြေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Harvard Medical School က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ တစ်နေ့ကို ရေရှစ်ခွက် သောက်သုံးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုကို မေ့ထားရပါတော့မယ်။
The real number of glass depends on age, gender, and weight. Don’t worry, though, we’re not gonna leave it that vague. Since we’ve all been accustomed to measuring by glass, experts say the ideal number ranges from four to six instead.
ရေပမာဏဘယ်လောက်သောက်သုံးသင့်တယ်ဆိုတာက အသက်အရွယ်၊ ကျား၊မ နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တွေပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒီမသေချာမှုကြီးကိုတော့ ဒီတိုင်းပစ်မထားခဲ့ပါဘူး။ ရေသောက်သုံးသင့်တဲ့ပမာဏကို ဖန်ခွက်နဲ့ယေဘုယျတိုင်းတာကြတာဆိုတော့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက အမှန်တကယ်သောက်သင့်တဲ့ပမာဏဟာ လေးခွက် ကနေ ခြောက်ခွက် အတွင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
The average of four to six only applies to generally healthy people, however. And, we bet your doctor or nutritionist would know more about how much water intake you actually need.
ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ပျမ်းမျှ ရေလေးခွက် ကနေ ခြောက်ခွက်အတွင်းသောက်သုံးရပါတယ်။ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ ရေပမာဏကို ကိုယ့်ရဲ့ ဆရာဝန်တွေ နဲ့ အာဟာရပညာရှင်တွေက အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
“Older people don’t sense thirst as much as they did when they were younger. And that could beaproblem if they’re onamedication that may cause fluid loss, such asadiuretic,” says Harvard Medical School’s Dr. Julian Seifter.
“သက်ကြီးရွယ်အိုတွေက ငယ်ရွယ်စဉ်ကလောက် ရေဆာတဲ့ခံစားမှုကို မရကြတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆီးသွားအောင် ဆေးကူထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။” လို့
Harvard Medical School က Dr. Julian Seifter က ဆိုပါတယ်။ That said, water intake doesn’t just come in the form ofatall glass. It also comes from the food we eat—water-rich food, to be exact—such as salad, fruits, and more.
၏ ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့ရေပမာဏဟာ ဖန်ခွက်ရှည်တစ်ခွက်ထဲကပဲရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ salad ၊ အသီးအနှံ အစရှိတဲ့ ရေဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေစားခြင်းကလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
This story originally appeared on esquireph.com minor edits were done by OOTDMYANMAR
esquireph.com တွင်ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါးကို OOTDMYANMAR မှ အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
Tags drink, glassesofwater, howmanywater, water